Student Success Act - Sharciga Guusha Ardayga - Somali Survey
Student Success Act - Sharciga Guusha Ardayga - Somali
Naga caawi inaan horumarinno qorshe maalgashi $ 5-8 milyan oo loogu talagalay ardayda Degmada David Douglas.
Horraantii sanadkan, gobolka Oregon wuxuu qaatay Xeerka Guusha Ardayga (HB 3427). Sharcigan wuxuu siin doonaa heerar taariikhi ah oo maalgelin cusub iskuulada Oregon. Dugsiga Degmada David Douglas looma sheegin lacagta saxda ah ee cusub ee la fili karo, laakiin waxaan ku qiyaasnay inay noqon karto inta u dhaxaysa $ 5 milyan iyo $ 8 milyan sanadkii sanadkasta oo ka bilaabma sanad dugsiyeedka 2020-21.
Waxaan u baahanahay caawintaada si aan u go'aamino sida loo maalgaliyo lacagtan hab sida ugu wanaagsan u taageeraya ardaydeena. Sharci ahaan, Xeerka Guusha Ardayga waxaa lagu bixin karaa afar qaybood oo ballaaran: yareynta cabirka fasalka, bixinta waxbarasho habaysan, kordhinta waqtiga waxbarida, iyo si loo haqabtiro baahida caafimaadka iyo caafimaadka ardayga.
Waxaan ka codsaneynaa dhammaan qoysaska, ardayda, shaqaalaha iyo xubnaha bulshada ee daneynaya inay sahamintan qaadaan. Jawaabahaaga ayaa loo adeegsan doonaa inay naga caawiyaan qorsheynta iyo kala-mudnaanta sida aan u maalgelinno lacagtan cusub ee la filayo.